Ọgwụ - AOOD Technology Limited
Ezi na ntụkwasị obi bụ ebumnuche nke ngwaọrụ ahụike na ngwaọrụ. N'ime sistemụ ndị a niile, ha na -etinye mkpa siri ike na sistemụ na ngwa ha. Slip ring dị ka akụkụ elektrọnik nke na -enyere nnyefe ike/ mgbaama/ data site na ọdụ kwụ ọtọ na akụkụ ntụgharị, ọ dị mkpa maka ọganiihu nke sistemụ nnyefe niile.
AOOD nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke inye azịza mgbanaka mgbanaka maka ngwa ahụike. Site na teknụzụ injinia kachasị ọhụrụ, ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na nka ọkaibe, AOOD jiri akara izizi dị mma yana mgbanaka mkpọda ntụkwasị obi dozie ike/ data/ akara maka nyocha CT, sistemụ MRI, ultrasound dị elu, sistemụ mammography dijitalụ, centrifuges ọgwụ, pendants ụlọ na ihe ngosi ịwa ọkụ ọkụ na ihe ndị ọzọ.
Ihe na -ahụkarị bụ sistemụ mgbanaka mgbanaka mgbanaka maka nyocha CT. Ihe nyocha CT chọrọ ịnyefe data onyonyo site n'usoro nchọpụta x-ray na-atụgharị gaa na kọmputa nhazi data na arụ ọrụ a ga-emerịrị ya site na mgbanaka mgbapụ. Mgbanaka mgbapụ a ga -enwerịrị nnukwu dayameta dị n'ime ma nwee ike nyefee nnukwu data n'okpuru oke ọrụ. AOOD nnukwu mgbanaka mgbanaka mgbanaka bụ naanị otu: n'ime dayameta nwere ike iru 2m, ọnụego nnyefe data nwere ike iru 5Gbit/s site na ọwa fiber optic ma nwee ike rụọ ọrụ ntụkwasị obi n'okpuru ọsọ ọsọ 300rpm.
Ngwaahịa emetụtara: Nnukwu mgbaaka mgbaaka buru ibu, Site na Bore Slip Rings